Kugadzira Zvigadzirwa Kugadzira Fekitori - China Kuumba Zvigadzirwa Kugadzira Vagadziri, Vatengesi
Shrimp Namatira Kugadzira Line
Shrimp paste inogadziriswa nekugadzirisa shrimp kuti iite minced nyama. Mushure mekubikwa, inonaka yakasimba uye ine yakasimba shrimp flavour. Iyo inowanzo kuve yakakurumbira dhishi yehari inopisa. Iyo otomatiki yekugadzira tekinoroji inoda kuti shrimp ipfuure nepano nyama grinder, chopper, yekuzadza muchina, yekupakisha muchina, yekukurumidza-freezer, nemimwe michina, uye firiji yekumira. Izvo zviri nyore uye zvinokurumidza kuzvibika kana uchidya. Iyo yakagadziriswa uye yakacheneswa shrimp nyama inopfuudzwa katatu ...
Luncheon Nyama Yekugadzira Line
Luncheon nyama chikafu chinowanzoitika muhupenyu hwezuva nezuva. Kusiyana neyakajairwa nyama yemombe yakakangwa kana nyama yenguruve, nyama yemasikati yakanyanya kusimba uye inokodzera vanhu vazhinji. Mutsara wekugadzira nyama yemasikati unoshandisa nyama kana nyama yakakangwa sezvinhu zvakagadzirwa, izvo zvinogona kuzadza zvakagadzirwa mumakani, uye ine vacuum-yakabatsira yekudyisa basa kudzivirira pores, kuremara, zvigadzirwa zvigadzirwa uye kusimba. Muchina uyu unogona kusvika ka90 paminiti, mari, inoshanda, uye yakaderera kudyiwa. Mushure mebasa, zviri nyore ku ...
Hove Bhora Kugadzira Line
Hove bhora idyiwa yakakurumbira muAsia. Inonyanya kugadzirwa nehove nyama uye starch, uye inozivikanwa kwazvo nekuda kwekunakirwa kwayo, nyowani inonaka uye hunyoro. Kune akawanda marudzi ehove mabhora zvinoenderana neyakaenzana yeakasiyana hove mbishi zvigadzirwa uye zvekubatsira zvinhu. Kusanganisira octopus mabhora, sandwich hove mabhora, Thai hove mabhora, Taiwan hove mabhora, nezvimwewo. Hove nyama yemhuka ndeye nyama yemhuka inogadziriswa nekurova, kuumba, uye kufashaidza nyama yehove. Frozen surimi inoshandiswa. Ikoko ...